Incorporation နှင့် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ငါထည့်သွင်းဖို့ EIN နံပါတ်လိုအပ်ပါသလား?
ထည့်သွင်းတဲ့အခါ file ဖို့ IRS ကိုစာရွက်စာတမ်းများရှိပါသလား?
ငါတ ဦး တည်းခြေလှမ်းအတွက်ထည့်သွင်းနိုင်သလား?
ထည့်သွင်းထားလျှင် DBA လိုအပ်ပါသလား။
ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက် "နှစ်ဆအခွန်" ကဘာလဲ?
“ Par Value” နှင့် Corporate Stock ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ကျွန်ုပ်၏ကော်ပိုရေးရှင်းသည် EIN နံပါတ်ကိုမည်သို့ရရှိသနည်း။
S Corporation ဆိုတာဘာလဲ။
သင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်မှာယူသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အမှာစာကိုထိုနေ့တွင်ပင်ဆောင်ရွက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများရှိပါကသင့်အားဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ဌာနသို့သွားသည်။ သင်ဝယ်ယူရန်ရွေးချယ်နိုင်သည် မြန်နှုန်းဖိုင်မှတ်တမ်း, ထိုနေ့, ဒါမှမဟုတ် 24 နာရီသင်၏အမှာယူမှုအာမခံချက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဖြစ်စေ။ သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုရေးဆွဲပြီးမှသင်ရွေးချယ်သောအချိန်ကာလအတွင်းမှန်ကန်တဲ့ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးရုံးသို့ပေးပို့ပါလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤအချိန်ကာလသည်သုံးရက်ဖြစ်သည်။ သင်၏စာရွက်စာတမ်းများသည်ပြည်နယ်ရုံး၌ရှိနေသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်သင်၏ပြည်နယ်၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်နှင့်အတူ, သင်စံသို့မဟုတ်အမြန်ပုံစံတင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေပြည်နယ်တင်ပြချိန် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း) အကြောင်းသင့်ကိုယ်စားလှယ်အားမေးမြန်းပါ။ ထို့နောက်စာရွက်စာတမ်းများကိုပြည်နယ်ရုံးနှင့်မှတ်တမ်းတင်ပြီးကုမ္ပဏီများသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဤအချိန်တွင်သင်၏အမှာစာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရေကြောင်းဌာနမှပြုလုပ်ပြီးသင်၏ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ IRS စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဘဏ်အကောင့်များစသည့်အခြားကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုပေါ် မူတည်၍ သင်၏ပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းမှုအစီအစဉ်ကို ဦး စားပေးမေးလ် (သို့) တစ်ညတည်းသင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
အော်ဒါမှာယူသည့်အချိန် + ပြည်နယ်ပြုပြင်ချိန် + တင်ပို့သည့်အချိန် (၁ ရက်)
ကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်သင်ပေါင်းသင်းပါကသင်ရွေးချယ်နိုင်သည် မြန်နှုန်းဖိုင်မှတ်တမ်း တူညီသောနေ့ကအပြောင်းအလဲနဲ့, ဒါမှမဟုတ် 24 နာရီဖြစ်စေနှင့်အတူသင်၏အမိန့်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကိုထိုအချိန်ကာလအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက်သင့်လျော်သောပြည်နယ်ရုံးသို့တင်ပို့ရန်အာမခံထားသည်။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကိုဒေါ်လာ ၁၅၀ မှ စတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနမှရရှိနိုင်သည်။ သင်ပြီးပြည့်စုံသော package (ရွေးချယ်ရန်) ကိုသင်ရွေးချယ်သောအခါသင်၏ပို့ဆောင်ခြင်းရွေးချယ်စရာများကိုနေ့ချင်းညချင်းပြည်နယ်နှင့်သင့်အားအဆင့်မြှင့်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ပြည်နယ်ပုံစံတင်ခြင်းကိုမြန်ဆန်စွာအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်၊ တင်သွင်းပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုပြင်ဆင်ရန်နှင့်တစ်ညလုံးသင့်ထံသို့တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးသည် ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ပြည်နယ်ရုံးသည်အပြောင်းအလဲအတွက်အချိန်အများစုကိုစားသုံးလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီများနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အမှာစာပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်အချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၁၀ ရက်အထိသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ထည့်သွင်းရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းမှာပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုပါ ၀ င်သည် မြန်နှုန်းဖိုင်မှတ်တမ်း upgrade ။
သင်၏ထည့်သွင်းမှုအမိန့်ဖြင့်အချိန်သက်သာရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ညအိပ်ညနေခင်းရုံးကိုပြည်နယ်ရုံးသို့သင်နှင့်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများ၏အကူးအပြောင်းကာလကိုလျှော့ချရန်အမြန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏အမိန့်ကိုပြည်နယ်ရုံးနှင့်အလျင်အမြန်တိုးမြှင့်ခြင်းသည်ပြည်နယ်တင်ပို့ချိန်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။ ဝယ်ယူရန်aမြန်နှုန်းဖိုင်မှတ်တမ်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်သင်ရွေးချယ်သောအချိန်ကာလအတွင်း၌ပင် (သို့) ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏အမှာစာကိုပြည်နယ်ရုံးသို့တင်ပို့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသေချာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသော package တွင် ဦး စားပေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်မြန်ဆန်သောပြည်နယ်ပုံစံတင်ပို့ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
သငျသညျကုမ္ပဏီများမှ Incorporated နှင့်အတူထည့်သွင်းသောအခါ, ငါတို့အွန်လိုင်းမှတဆင့်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနမှတဆင့်ဖြစ်စေ, သင်တို့၏အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်တိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံမှုအတွက်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ဌာနသို့သွားပါလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး စွာသင်ထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်လိုက်သောအမည်ကိုသင့်ပြည်နယ်ရုံး၏ရရှိနိုင်မှုကိုစစ်ဆေးသည်။ အဲဒါကိုမရရှိနိုင်ပါက
ဟုတ်တယ်။ Companies Incorporated သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များ၊ အထူးသဖြင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ အကန့်အသတ်ရှိသောတာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်အကန့်အသတ်ရှိသောမိတ်ဖက်များအစရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်များကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့တွင်အထူးပြုသည့်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
မထည့်သွင်းမီသင် EIN နံပါတ်မလိုအပ်ပါ။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်သင်သည်တူညီသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်သာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းမ ၀ င်ခင်တွင် EIN နံပါတ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ Incorporated ကုမ္ပဏီများသည်သင်၏ EIN လျှောက်လွှာကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင့်အတွက် EIN နံပါတ်ကိုရယူနိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် EIN နံပါတ်လိုအပ်သည်။
ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောဒေသဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်များအတွက်သင့်ခရိုင်နှင့် / သို့မဟုတ်မြို့နှင့်ဆက်သွယ်သင့်သည်။ အချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်သို့မဟုတ်ထပ်တိုးလက်မှတ်များသို့မဟုတ်ပါမစ်များလိုအပ်လိမ့်မည်။
ဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့သောပြည်နယ်များသည်ထုတ်ဝေရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းကိုသတင်းစာတိုတွင်ကြော်ငြာရန်လိုသည်။ ကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းထားသည့်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းနှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်သင်၏ပြည်နယ်အတွင်းရှိမည်သည့်အထူးလိုအပ်ချက်များကိုမဆိုကိုင်တွယ်သည်။
သင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုသင်မှာယူသောအခါ၊ entity name နှင့် identifier ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။ အမှတ်အသားသည်သင်၏အမည်နှင့်လိုက်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်“ Corp”,“ Corporation”,“ Inc. ”,“ LLC”,“ Limited Liability Company” စသည်ဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်၏ပထမဆုံးအဖွဲ့အစည်းအမည်နှင့်အမှတ်အသားကိုမရရှိနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိမ့်မည်။ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်မှုနှင့်အမည်ကိုသင်၏ပြည်နယ်နှင့်အတူရရှိနိုင်သည်အထိဆက်လက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုဌာနမှသင့်အားဆက်သွယ်မှုအမိန့်အပြည့်အစုံမပြုလုပ်မှီသင့်ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
စတော့ရှယ်ယာများထုတ်ပေးခြင်းသည်ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ပုံမှန်ပုံစံဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံးကိုအပြည့်အ ၀ လိုက်နာရန်အတွက်စတော့ရှယ်ယာများထုတ်ပေးခြင်းသည်လိုအပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စတော့ရှယ်ယာများထုတ်ပေးရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းကိုတစ် ဦး ချင်း၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများသို့ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ သင်၏ဘဏ္financialာရေးစီမံသူသို့မဟုတ်ဥပဒေအကြံပေးနှင့်ထုတ်ပေးနိုင်သည့်စတော့ရှယ်ယာအမျိုးအစားများ၊ ခွင့်ပြုထားသောအစုရှယ်ယာပမာဏနှင့်ယင်းတို့၏တန်ဖိုးနှင့်သင်၏အခွန်မြင်ကွင်းကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ ကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းထားသည့်ကုမ္ပဏီများတွင်စတော့ရှယ်ယာလက်မှတ်များပါ ၀ င်သည်။
အထုပ်တစ်ခုစီတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဇယားကွက်ဖြစ်သည်။
အပြီးအစီးပက်ကေ့ အခြေခံအထုပ် Starter Package ကို
လျင်မြန်စွာဖိုင်ဝန်ဆောင်မှု - စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြနေကြသည်
စျေးနှုန်းမပါဝင်ပါ ပြည်နယ်အခကြေးငွေ) $380 $280 $99
အလွယ်ဆုံးပုံစံကိုထည့်သွင်းနိုင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုကိုပြုလုပ်သောပြည်နယ်အတွင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်း (Corporations) များ (သို့) ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ (LLC သို့မဟုတ် LP) များကိုသာသင်၏ပြည်နယ်ရုံးသို့တင်သွင်းပြီးမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုကိုပြုလုပ်သောနေရာတွင်ပါဝင်မှုအခြေအနေသည်ဆောင်းပါးများကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီတင်သွင်းခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသောပြည်နယ် (များ) တွင်နိုင်ငံခြားအရည်အချင်းပြည့်မှီခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးရန်အတွက်နိုင်ငံခြားအရည်အချင်းပြည့်မှီရန်အတွက်မူရင်းဆောင်းပါးများ၏မူရင်းမိတ္တူများနှင့်ကောင်းမွန်သောရပ်တည်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရန်လိုအပ်သည်။
ထည့်သွင်းတဲ့အခါ file ဖို့ IRS ကိုစာရွက်စာတမ်းများရှိပါသလား
IRS တွင်စာရွက်စာတမ်းများထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်“ Sub အခန်း S Election” ကဲ့သို့သောအခြားအခွန်အခအခြေအနေတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါကသင်၏ IRS ပုံစံ ၂၅၅၃ ကို IRS နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များအတွက်အချိန်ကာလအတွင်းတင်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဤအခွန်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုများကိုသင်၏ဘဏ္plannာရေးစီမံသူသို့မဟုတ်စာရင်းကိုင်နှင့်ပြုလုပ်သင့်သည်။ ကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းထားသည့်ကုမ္မဏီများတွင်သင့်တွင်ပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းမှုအစီအစဉ်များပါ ၀ င်သောသင့်အတွက်ပြည့်စုံသောအခွန်ပုံစံများပါ ၀ င်ပြီး၎င်းကိုသင်တင်သွင်းရန်နှင့်သင်၏အခွန်အခအခြေအနေကို IRS တွင်ပြောင်းလဲရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်။ စားသုံးသူများဘက်မှကြည့်လျှင်သင်သည်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်သွယ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏အမှာစာအဆင့်တိုင်းကိုအဆင့်တိုင်းမွမ်းမံမှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သင်၏စာရွက်စာတမ်းအထုပ်တစ်ခုလုံးသည်တစ်ကြောင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်စာရွက်စာတမ်းများစွာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအေဂျင်စီများစွာရှိသည်။ ကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းမှုသည်ဤအရာအားလုံးကိုသင့်အတွက်ကိုင်တွယ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောအဆင့်တွင်ပါဝင်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်၏သဘောသဘာဝအရအခွန်စီမံချက်အပြောင်းအလဲများကိုကိုင်တွယ်နိုင်ရန်အတွက်သင်၏စာရင်းသွင်းမှုအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်သည့်အခါသင်၏စာရင်းကိုင်သို့မဟုတ်ဘဏ္plannာရေးစီမံသူသည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အသေးစိတ်ကိုသိစေရန်ပညာရှိရာရောက်သည်။ သင်၏ပြည်နယ်အမျိုးအစားနှင့်သင်၏ပြည်နယ်လည်ပတ်မှုပုံစံများကိုသိရှိနားလည်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ ပြည်နယ်အားလုံးသည်ဥပဒေအရကော်ပိုရေးရှင်းများသည်အနည်းဆုံးနှစ်စဉ်ရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးများကျင်းပရန်လိုအပ်သည်။ ဤအစည်းအဝေးများ၏မှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းထားရမည်၊ မတင်သွင်းရသော်လည်းသင်လိုအပ်ပါကမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသင့်အနေဖြင့်အဖွဲ့အစည်း၏မှတ်တမ်း၊ လိပ်စာများ၊ အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်စသည်ဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ကြေငြာချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအားသင်၏ပြည်နယ်ရုံးသို့တင်သွင်းရပါလိမ့်မည်။ ) သင်၏ပြည်နယ်ရုံးနှင့်ကောင်းသောအနေအထားတွင်ရှိနေရန်လိုအပ်သည်။ အခြိနျအခြိနျအခြိနျပေးဆကျခွငျးသညျအခွားအရေးပါသောအကွောငျးအရာတစျခုဖွစျသညျ၊ ထို့ကွောငျ့သငျသညျသငျ့လုပျငနျးသစ်နှငျ့ ပတျသကျ၍ အရေးယူမှုမခံရလြှငျ၊
ဟုတ်တယ်။ သင်၏အမြဲတမ်းသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၎င်းသည်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများ၊ သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အပြောင်းအလဲများ (LLC) နှင့်အခြားလုပ်ရပ်များသည်သင်၏ပြည်နယ်ရုံးသို့ကုမ္ပဏီ၏အမည်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အရာရှိများနှင့်ဒါရိုက်တာများကိုဖြုတ်ချခြင်းသို့မဟုတ်ဖြုတ်ခြင်းစသည့်ပြင်ဆင်မှုပုဒ်မတစ်ခုကိုဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်။ , သင့်ရဲ့ရှယ်ယာ (ကော်ပိုရေးရှင်း) ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှယ်ယာသို့မဟုတ်တန်းတူတန်ဖိုးပြောင်းလဲခြင်း။ ကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းထားသည့်ကုမ္ပဏီများသည်သင်၏ဆောင်းပါးများကိုစီးပွားရေးအကြောင်း ၁ ရက်အတွင်းအကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်နိုင်သည်။
နည်းဥပဒေများသည်အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ကုမ္ပဏီကိုမည်သို့လည်ပတ်သည်ကိုဖော်ပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရာရှိများသို့မဟုတ်မန်နေဂျာများအကြားအခွင့်အရေးနှင့်အာဏာခွဲဝေမှုကိုဖော်ပြထားသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပြည်နယ်ရုံးသို့တင်သွင်းခြင်းမရှိပါ၊ Entity အမျိုးအစားများသည်နည်းဥပဒေများ၊ LLC နှင့် LP များသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များနှင့်ကွဲပြားသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီအားစီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူစေရန်သာမကနည်းဥပဒေများမှတစ်ဆင့်မည်သို့မည်ပုံစီမံခန့်ခွဲမည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သကဲ့သို့ခွဲခြားနိုင်သည်။ ဘဏ္fiscalာရေးနှစ်၊ အစည်းအဝေးများကျင်းပပုံ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်သူတို့၏အရည်အချင်းများ၊ သင်၏နည်းဥပဒေများကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောကော်ပိုရေးရှင်းစာအုပ်များမည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း။
ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအရာသည်ကစားခြင်းသို့ရောက်သောအခါသင်ငွေအများဆုံးရရှိသောအခါဖြစ်သည်။ DBA (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာ) သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမှတ်ပုံတင်ထားသောအမည်ဖြင့်ဖော်ထုတ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ထည့်သွင်းထားသည့်အမည်သည်ဥပမာအား ကယ်လီဖိုးနီးယားကွန်ပျူတာပြုပြင်ရေး, Inc ပြီးတော့မင်းကစီးပွားရေးလုပ်နေတယ် www.WeFixYourPC.comသို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်လက်ခံရရှိသောရန်ပုံငွေများကိုသွင်းရန် DBA တစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည် www.WeFixYourPC.com။ အမှန်ကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်နာမည် ၂ ခုရှိတယ်။ သင်တစ် ဦး ချင်းပြုသကဲ့သို့ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ် LLC ကို DBA လုပ်နိုင်သည်။
ထည့်သွင်းထားသောကုမ္ပဏီများသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်အတွက်အခမဲ့သောအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အဖွဲ့အစည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းပြန်ကြားရေး LLC ပြန်ကြားရေး မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
စီးပွားရေးဘဏ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်သင်တင်သွင်းထားသောနှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောထည့်သွင်းထားသည့်ပုဒ်မနှင့် IRS မှထုတ်ပြန်ထားသော Federal Employer Identification နံပါတ်လိုအပ်လိမ့်မည်။ Plus အားမည်သည့်ကန ဦး သိုက်ပမာဏ။
မဟုတ်ရင်စံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်လူသိများ AC Corporation, မူကွဲအများအပြားရှိပါတယ်။ ဤအရာများနှင့်သီးခြားရပ်တည်နေခြင်းသည်အကျိုးအမြတ်မယူသောကော်ပိုရေးရှင်းများဖြစ်ပြီးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့်အခွန်သတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင်ကျရောက်သည်။ အမြတ်အစွန်းကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်“ C”,“ S” နှင့် Professional Corporation တို့ရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်“ ကော်ပိုရေးရှင်း” သည်“ C” ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ IRS ကုဒ်၏ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရအခွန်ကောက်ခံသောကြောင့်၎င်းကို C ကော်ပိုရေးရှင်းဟုခေါ်သည်။ C ကော်ပိုရေးရှင်းများသည်တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးဖြစ်နိုင်သည့်အကန့်အသတ်မဲ့အစုရှယ်ယာရှင်များရှိနိုင်သည်။ S ကော်ပိုရေးရှင်းကိုသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှောင်ရှားရန်ဖန်တီးခဲ့သည် အခွန်နှစ်ထပ်နှစ် IRS ကုဒ်၊ အခန်း“ S” အောက်တွင်အကျုံးဝင်ပြီးအစုရှယ်ယာရှင်များ၏ပမာဏကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကော်ပိုရေးရှင်းများသည်အဓိကအားဖြင့် C ကော်ပိုရေးရှင်းများဖြစ်သည့်ဆရာဝန်များ၊ သွားဆရာဝန်များနှင့်ရှေ့နေများကဲ့သို့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ဤကော်ပိုရေးရှင်းအမျိုးအစားများကိုပြည်နယ်ဥပဒေများအရဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
AC Corporation သည် IRS ပုံစံ ၁၁၂၀ ကို အသုံးပြု၍ ဖြတ်တောက်ပြီးနောက်အသားတင်အမြတ်အားလုံးအပေါ်အထူးကော်ပိုရိတ်နှုန်းများအောက်တွင်သီးခြားအခွန်ကောက်ခံသည်။ သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခွန်အစီရင်ခံ။ အဆိုပါ C ကော်ပိုရေးရှင်းတစ် taxable entity ဖြစ်ပါတယ်။
C ကော်ပိုရေးရှင်းသည်အခွန်ပေးဆောင်ပြီးနောက်အခွန်အခအမြတ်အစွန်းများကိုရှယ်ယာရှင်များအားခွဲဝေများပုံစံဖြင့်ဖြန့်ဝေနိုင်သည်သို့မဟုတ်အနာဂတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်စီးပွားရေးတွင်ထားနိုင်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းသည်စီးပွားရေးအမြတ်အစွန်းအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကျန်အမြတ်အစွန်းများကိုအမြတ်အစွန်းပြန်အမ်းငွေအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်သည့်ရှယ်ယာရှင်များအားပေးဆောင်သောအခါ၎င်းသည်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအတွက်အခွန်နှစ်ဆတိုးစေနိုင်သည်။ IRS Code ၏ပုဒ်မ S သည်ဤပြissueနာကိုကော်ပိုရေးရှင်းငယ်များအနေဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီးထိုကုမ္ပဏီအား လက်တွဲ၍ အခွန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်အခွန်ပေးဆောင်စေနိုင်သည်။ S ကော်ပိုရေးရှင်းတွင်မည်သူကမည်သူဖြစ်နိုင်သည်နှင့်မည်မျှရှယ်ယာရှင်များမည်မျှရှိသည်ကိုကန့်သတ်ထားသည်။
နည်းဥပဒေများဟာကော်ပိုရေးရှင်းအုပ်ချုပ်။ ၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာပေါ်လစီများကိုသတ်မှတ်သည့်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နည်းဥပဒေအားလုံးအားနည်းဥပဒေများမည်သို့ပြောင်းလဲသည်၊ ပြင်ဆင်သည်ဖြစ်စေထည့်သွင်းထားသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အရာရှိများထံမှသက်ဆိုင်သူများ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အခွင့်အရေးများနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုဖော်ပြထားသည်။ ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများကိုမည်သည့်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖယ်ဒရယ်ရုံးနှင့်မျှမတင်ပါ။
အချို့သောပြည်နယ်များတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုမည်မျှရှယ်ယာမည်မျှပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ အချို့မှာအစုရှယ်ယာပမာဏနှင့်အစုရှယ်ယာတစ်ခုစီ၏တန်ဖိုးအပေါ် အခြေခံ၍ အခွန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသည်။ သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းမည်မျှရှိသင့်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင်၏ပြည်နယ်ရှိသင်၏တရားဝင်သို့မဟုတ်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။ အထွေထွေလမ်းညွှန်အနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရင်းအနှီးကိုဝယ်ယူရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိသောအစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်နှစ် ဦး ပါသောကော်ပိုရေးရှင်းငယ်များအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောအစုရှယ်ယာအနည်းငယ်ကိုတန်ဖိုးအနည်းဆုံးဖြင့်အစုရှယ်ယာ ၁၅၀၀ ကဲ့သို့သောဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာဖြင့်အကြံပြုသည်။ ဤပမာဏသည် franchise အခွန်ကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်မလုံလောက်ပါ။
Par တန်ဖိုးဆိုသည်မှာကော်ပိုရိတ်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုချင်းစီ၏ရှယ်ယာတစ်ခုစီတန်ဖိုးသို့မဟုတ်ယင်း၏တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်၎င်း၏တန်းတူတန်ဖိုးကို parameters တွေကိုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်။ အချို့သောပြည်နယ်များကမူအစုရှယ်ယာတစ်စု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ရှယ်ယာများကို $ .001 ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အချို့ပြည်နယ်များကကုမ္ပဏီအခွန်ကိုကော်ပိုရေးရှင်း၏အစုရှယ်ယာနှင့်တန်းတူတန်ဖိုးဖြင့်တွက်ချက်သည်။ သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းကိုဖွဲ့စည်းသည့်ပြည်နယ်တွင်အလုပ်လုပ်သောဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အစုရှယ်ယာအနည်းငယ်နှင့်တန်ဖိုးနိမ့်ကျမှုသည်ဖြစ်နိုင်လျှင်အနည်းဆုံးအခွန်စည်းကြပ်မှုအခွန်အနည်းဆုံးရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်။ ပြည်နယ်ဥပဒေအရကော်ပိုရေးရှင်းအားလုံးသည်အနည်းဆုံးနှစ်စဉ်အစုရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးတစ်ခုရှိရမည်။ ဤအစည်းအဝေးများအားအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပုံစံဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုကော်ပိုရိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များမှတစ်ဆင့်မှတ်တမ်းတင်ပြီးကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။
သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းသည်တာဝန်ယူမှုကိုအကာအကွယ်ပေးရာတွင်အများဆုံးသောကြောင့်ကော်ပိုရိတ်ထုံးတမ်းစဉ်လာများသည်အရေးကြီးသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးဘဝကိုခွဲခြားရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုရာတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းသည်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းကိုအမြင့်ဆုံးအထိစီမံခန့်ခွဲရမည်။ ဤသည်မှာကစားရန်ဖြစ်လာသည့်“ do's and dont's” များစွာရှိသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးရန်ပုံငွေများကိုရောစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်လာလျှင်ကော်ပိုရေးရှင်းအားတရားရုံးမှစိန်ခေါ်ပါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ဤပုံစံတွင်အခွန်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု၊ အစီရင်ခံခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ အခြားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပုံစံများမှာပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအရပြဌာန်းထားသောဥပဒေများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ -
ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်း။ ဥပဒေအရပြည်နယ် ၅၀ အားလုံးသည်ကော်ပိုရေးရှင်း၏အစုရှယ်ယာရှင်များသည်အနည်းဆုံးနှစ်စဉ်အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပရန်နှင့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းဖွဲ့စည်းစဉ်သို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းကိုဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သည်။ ဤအစည်းအဝေးများတွင်မိနစ်ပိုင်းများကိုယူထားသင့်ပြီးကော်ပိုရိတ်မှတ်တမ်းမိနစ်သို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင်ထားသင့်သည်။ ဤအစည်းအဝေးများတွင်စီးပွားရေးကိစ္စများကိုဆွေးနွေးပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များချပြီးကော်ပိုရေးရှင်း၏အရာရှိများကနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသောအရေးယူမှုများကိုဘုတ်အဖွဲ့မှအတည်ပြုသည်။ ဤပုံစံသည်မကြာခဏသတိမမူမိဘဲကော်ပိုရေးရှင်းကုလားကာအားစိန်ခေါ်သောအခါကစားခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ သင့်လျော်သောအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှအတည်ပြုခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့သည်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်သာလိုအပ်သည်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်- ထည့်သွင်းထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းသည်အများပြည်သူမှတ်တမ်းတွင်ဆာဗာလုပ်ငန်းစဉ်၏လိပ်စာတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် PO Box တစ်ခုမဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ကော်ပိုရေးရှင်းအခြေစိုက် (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်သောပြည်နယ်အတွင်းရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာတစ်ခုဖြစ်ရပါမည်။ ကိစ္စရပ်တော်တော်များများတွင်အသေးစားစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည်၎င်းတို့၏အိမ်လိပ်စာကိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းတွင်မလိုချင်ကြသောကြောင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွင်ပေါ်လွင်ပြီးဤပုံစံကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးသောမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ကိုရွေးချယ်ကြသည်။
သတင်းအချက်အလက်၏နှစ်ပတ်လည်ထုတ်ပြန်ချက်- တင်သွင်းထားသောအဖွဲ့အစည်းတိုင်း (သို့) ထည့်သွင်းထားသောစီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံသည်နှစ်စဉ်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုတင်ပြရမည်။ ဤအချက်သည်ပြည်နယ်ရုံးအားစီးပွားရေး၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်သောလိပ်စာများ၊ အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ကိုဖော်ပြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အမည်ခံအခကြေးငွေပါဝင်ပြီးပြည်နယ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အများစုတွင်အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းဖြေ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကော်ပိုရေးရှင်းတိုင်းကဖက်ဒရယ်နဲ့ဖရန်ချိုက်စ်အစိုးရတွေဆီကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမယ်။
ဘဏ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် EIN နံပါတ်လိုအပ်သည်။ IRS မှသင်၏နံပါတ်ကိုရရှိရန်အတွက်ပုံစံကိုဖြည့်ရမည်၊ လက်မှတ်ထိုးရမည်။ ဖြည့်စွက်ရမည်။ ပုံစံကိုသင်ဖြည့်သောအခါ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ဖြစ်လျှင်လုပ်ငန်းစဉ်သည်လွယ်ကူသည်။ သင့်တွင်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီ EIN နံပါတ်ရှိပြီးဖြစ်သည်ဆိုလျှင်နောက်ထပ်အချက်အလက်လိုအပ်ချက်များရှိသည်။ သင်ဖုန်းခေါ် ဆို၍ သင်ဆန္ဒရှိပါကလျှောက်ထားနိုင်သည်။ Incorporated ကုမ္ပဏီများသည်သင်၏ EIN ပုံစံကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်အတွက် EIN နံပါတ်ကိုရယူနိုင်သည်။ အဲဒါလွယ်ကူပါတယ်
ကော်ပိုရိတ်များဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်း၏ပိုင်ရှင်များသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များသည်ကော်ပိုရိတ်စီမံခန့်ခွဲမှုအားကြီးကြပ်ရန်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကိုရွေးချယ်သည်။ ကော်ပိုရေးရှင်း၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှရွေးချယ်ထားသည့်ကော်ပိုရိတ်အရာရှိများ၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကော်ပိုရေးရှင်းတွင်အဓိကရာထူးရာထူး ၄ ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာသမ္မတ၊ ဒုသမ္မတ၊ ဘဏ္Treာရေးမှူးနှင့်အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအရာရှိများအမျိုးအစားများပါ ၀ င်ရန်အတွက်ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျင့်သုံးနိုင်သည်။
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည်စုရုံးထားသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးကော်ပိုရေးရှင်း၏ရှယ်ယာရှင်များကရွေးချယ်သည်။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည်ကော်ပိုရေးရှင်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပေါ်လစီများကိုကြီးကြပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်အရာရှိများရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးပမာဏအတွက်လိုအပ်ချက်မရှိပါ။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
သငျသညျထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာကောက်ယူရမည်ဖြစ်သည်အများအပြားလည်ပတ်မှုထုံးစံရှိပါတယ်။ ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေနှစ်ခုလုံးဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးစာရွက်စာတမ်း, အစီရင်ခံခြင်းနှင့်အမည်ခံကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။ အဓိကအားနည်းချက်မှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ ၀ င်သော်လည်း၊ များသောအားဖြင့်တာ ၀ န်ခံမှုကာကွယ်ခြင်းနှင့်အားသာချက်များသည်၎င်းထက်များစွာပိုများသည်။
ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးများသည်ပြည်နယ်ဌာနခွဲရုံး၏အတွင်းရေးမှူးထံတင်ပြခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအမှန်တကယ်စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်း၏“ မွေးစာရင်း” ဖြစ်ပြီးတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။
AS Corporation သည် IRS အခွန်ခွဲခြားခြင်းအောက်တွင်ကျရောက်သောကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အခန်းကြီး S တွင် IRS ပုံစံ ၂၅၅၃ ကို အသုံးပြု၍ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကော်ပိုရေးရှင်းအားစီးပွားဖက်အဖြစ်အခွန်ကောက်ခံရန်ခွင့်ပြုသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အခွန်ရှင်းတမ်း။
အသက် ၁၈ နှစ်ကျော်ပြီးဖြစ်သောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မည်သူမဆိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ တိုင်းပြည်နှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမဟုတ်သူများနေထိုင်ရန်အခြားစံသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်များပါ ၀ င်နိုင်သောအဓိကလည်ပတ်မှုပုံစံများမှာမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည်ပထမနှစ်အတွက်ပြည်နယ် ၅၀ လုံးတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်စားလှယ်များအားအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းကိုမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ သင်၏ပြည်နယ်သို့တင်သွင်းသောနှစ်ပတ်လည်အချက်အလက်များသည်သင်၏ပြည်နယ်ပေါ်မူတည်ပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၅ ဒေါ်လာမှ ၅၅ ဒေါ်လာခန့်အထိကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီးအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်တင်သွင်းနိုင်သည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကိုကော်ပိုရေးရှင်း၏အတွင်းရေးမှူးကမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်မျှမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
အချက်အလက်ထည့်သွင်းပါ LLC ပြန်ကြားရေး မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကော်ပိုရေးရှင်းများကိုစံ C ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်တင်သွင်းထားပြီး S ကော်ပိုရေးရှင်း၏အခြေအနေကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဓိကခြားနားချက်မှာစီးပွားရေးအမျိုးအစားနှင့်မည်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်စေ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆရာဝန်များ၊ သွားဆရာ ၀ န်များနှင့်ရှေ့နေများသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကော်ပိုရေးရှင်းများဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးမတ်လ 25, 2018 ရက်တွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်